Ngafunda Ukusebenza Nabanye | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
ULiu Heng Esifundazweni SaseJiangxi
Ngomusa kaNkulunkulu, ngathatha umthwalo wokuba ngumholi webandla. Ngaleso sikhathi, nganginomdlandla omkhulu futhi ngenza isinqumo phambi kukaNkulunkulu: Noma ngihlangabezana nani, ngeke ngishiye imithwalo yami. Ngizosebenzisana kahle nomunye udade futhi ngizoba umuntu ofuna ukulandela iqiniso. Kodwa ngangimane ngizimisele, futhi ngangingayazi indlela yokungena ekubeni ngokoqobo ebuhlotsheni obunokusebenza obunokuzwana. Lapho ngiqala ukuhlela izindaba zebandla nodade engangizosebenza naye, futhi lapho siba nokungaboni ngaso linye, ngangithandaza ngobuqotho kuNkulunkulu ngicele Yena ukuba avikele inhliziyo nomoya wami ukuze ngingagxeki engangisebenza naye. Nokho, nganginaka kuphela ukulawula izenzo zami ukuze ngingabi nokungaboni ngasolinye nengangisebenza naye, ngakho ngangingangenile eqinisweni. Ngenxa yalokho, ngokuhamba kwesikhathi, ngaba nokungavumelani okuningi nodade. Ngesinye isikhathi ngangifuna ukukhuphulela udade emsebenzini wokunisela amakholwa amasha, udade engangisebenza naye wathi lowo dade akalungile. Ngemuva kokuba sengifake omunye endaweni yakhe, waqhubeka nokuthi naye akalungile. Ngokukhathazeka nangokuthukuthela ngashesha ngathi: “Akekho umuntu olungile, nguwe kuphela olungile!’’ Ngenxa yalokho, angiphindanga futhi ngaluphakamisa lolu daba. Lapho engibuza ngalo, ngokufutheka ngathi: “Khetha noma ubani omfunayo! Anginandaba!’’ Ngemuva kwalokhu, kungakhathaleki ukuthi wayethini, uma kwakuba nanoma yikuphi ukungavumelani, ngangingasho lutho, ngangithula nakho ngicabanga ukuthi ngokwenza lokho ngigwema ukuxabana. Ngezinye izikhathi ukuthula kwakungabekezeleleki, ngakho ngangicasha endaweni ethile bese ngikhala, ngizwe sengathi ngoniwe. Futhi ngaze ngacabanga: Ingabe awunalo ikhono? Khona-ke zenzele wena! Ngizokubukela uzenza isiphukuphuku! Kamuva ngesinye isikhathi, umholi osezingeni elingaphezulu wanginika umsebenzi wokuthi ngibhekane nawo. Yonke indaba yanqunywa futhi kwakuhlelwa yimi, futhi ngazizwa nganeliseke kakhulu ngalo. Ngacabanga ukuthi udade engangisebenza naye uzongidumisa futhi angiduduze. Ngokungalindelekile, engangisebenza naye walenqaba njengebhodwe lamanzi abandayo athelwa phezu kwami, wathi: “Empeleni akuyona nhlobo indlela efanele yokwenza lokhu’’ Lokhu kwangicasula ngempela. Ngacabanga: Awuzange ngisho uqonde isimo sangempela wase uvele ukuchitha nje. Lokhu ukuzazisa kwangempela! Ngenxa yalokho, sonke sabambelela emibonweni yethu futhi akekho kithi owayezimisele ukuthobela omunye. Ngemva kwalokho, ngangingalaleli ngisho nezingxoxo zezwi likaNkulunkulu. Lapho ngicabanga ngakho ngokwengeziwe, kwaba yilapho ngizwa ngokwengeziwe ukuthi wayesephutheni. Uyena owayesebenzisa ithuba lokuba ngaphezulu kwakhe ukuze ngamabomu enze izinto zibe nzima kimi. Ngaphinde ngacabanga ngendlela engangimbekezelele ngayo ngokuphindaphindiwe, nokho wayelokhu engiphatha ngale ndlela. … Lapho ngicabanga ngokwengeziwe ngalokhu kwaba yilapho ngizizwa ngoniwe ngokwengeziwe, kwaze kwaba yilapho ngisala ngokuphelele ebumnyameni futhi ngalahlekelwa ukusebenza koMoya oNgcwele. Kusukela ngaleso sikhathi, ngangingasazimisele ukusebenza naye. Ngacabanga: Ngoba kunzima ukubhekana nakho, ngizomane ngikucashele. Ngaleso sikhathi futhi ngangiqaphela ukuthi lolu hlobo lwesimo lwaluyingozi kakhulu. Ngacabanga ukuthi kungangcono ukucela ukuba kushintshwe imisebenzi ngokushesha okunokwenzeka ukuze kugwenywe into embi. Ngenxa yalokho, ngasebenzisa isiqu esingokomoya esincane kanye nokwehluleka kwami njengesaba sokubhala incwadi yokwesula. Ngokushesha ngemva kwalokhu, umholi osezingeni elingaphezulu waxoxa nami ngesimiso sokuvuma ukwehluleka kanye nokwesula kanye nokucabangela okukhulu uNkulunkulu akwenzile ekusindiseni abantu. Kodwa ngase ngiyenze lukhuni inhliziyo yami futhi angizange ngiyithambise.
Ngakusasa ekuseni ngemva kokuvuka, ikhanda lami lalingenalutho ngokuphelele. Nalapho ngithandaza, ngangingamuzwa uNkulunkulu futhi ngezwa sengathi uNkulunkulu ungishiyile. Ngangesaba futhi ngethukile; empeleni kwakuwukuziphatha kwami okwenza uNkulunkulu angenyanye. Ngenxa yalokho ngaqala ukuzihlola. Ngemva kokuba ngicabange ngayo yonke into eyayenzekile, ngakwazi ukubona ukuthi isimo sami sasenze ukuthi uNkulunkulu angenyanye. Imicabango yami nezenzo zami zazifana ngokuphelele nezomuntu ongakholwa. Ngangiphila njengomuntu ongakholwa, owayehlala engaguqukile. Izwi likaNkulunkulu lalingekho ekuziphatheni kwami futhi ngangingenakho ukuhlonipha uNkulunkulu. Ngangingeyena neze umuntu owayamukela iqiniso. Ngenxa yalokho, ngangikhohliswe uSathane futhi ngase ngidele imithwalo yami ngingaqondile. Ngemva kokuqaphela lokhu, ngokushesha ngakhothama phambi kukaNkulunkulu futhi ngaphenduka: “O Nkulunkulu Somandla, ngonile. Ngikholelwa Kuwe, kodwa bengingazimisele ukubona umsebenzi Wakho. Uhlele isimo sami futhi bengingazimisele ukusamukela; ngenhliziyo yami yonke ngifuna ukugwema ukusolwa nokwahlulelwa Nguwe, futhi lapho kufika uthando Lwakho kimi, angibanga kuphela ongabongi, ngibuye futhi ngakhononda Kuwe futhi ngangakuqonda Wena. Ukuziphatha kwami kukuzwise ubuhlungu. O Nkulunkulu, ngiyabonga ngokungembula emsebenzini wakho futhi ungivumele ukuba ngibone isimo sikaSathane esingaphakathi kimi. Ukube bekungenjalo, bengiyolokhu ngicabanga ukuthi angimubi. Manje sengiyabona ukuthi isiqu esingokomoya sami sincane ngempela. Ngeke ngisingathe ngisho ukwahluleka okuncane. Lapho kwenzeka noma yini encanyana engingayithandi, ngifuna ukukukhaphela. Sengilahle izifungo engazenza Nawe. O Nkulunkulu, ngizimisele ukuphenduka; ngizimisele ukuzazi mina ngamazwi Akho futhi ngamukele ukwahlulela nokusola kwamazwi Akho. Ngizimisele ukuzithoba Kuwe kulesi simo futhi ngisebenze kahle nodade. O Nkulunkulu, angisazimisele ukuqhubeka ngiphile ngaphansi kokubusa kukaSathane futhi ngivinjwe yisimo sami esonakele. Angisazimisele ukuphilela isithunzi sami, kodwa ngizimisele ukwanelisa Wena kube kanye!’’ Ngemva kokuthandaza, ngagcwala izinyembezi, ngase ngihoxisa ngokushesha incwadi yokwesula kwami futhi ngayidabula yaba yizicucu khona lapho. Lapho sihlangana ngalolo suku, abambalwa bethu babefunda izwi likaNkulunkulu ndawonye: “Igama nesithunzi senu sicekeleke phansi, isithunzi senu sehlile, indlela enikhuluma ngayo iyihlazo, nempilo yenu iyanyanyisa, bonke ubuntu benu buphansi. Izingqondo zenu zincane anibacabangeli abanye futhi nixabanela nezinto ezincane. Nilwela izikhundla nokuthathelwa phezulu, ningaze niyophonseka esihogweni, phakathi echibini lomlilo” (Kucashunwe “Isimilo Senu Sibi Kakhulu!” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni). “Abantu abadingi okuningi kubona uqobo, kodwa badinga okuningi kwabanye. Kufanele babe nesineke futhi bababekezelele, babazise, babondle, babamamathekele, babamukele, futhi babathobele. Kufanele babanakekele ngezindlela eziningi, futhi abakwazi ukubaqinisela isandla, babathukuthelise, noma benze noma yini abangeke bayithande. Ukucabanga komuntu kuntula kakhulu!” (“Abantu Abahlala Benezimfuneko KuNkulunkulu Bangabacabanga Kancane Kakhulu” encwadini ethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe) Izwi likaNkulunkulu langilethela ngokuphelele isimo esiyihlazo nokubonakala kobudeveli ekukhanyeni. Ngaba namahloni kakhulu kangangokuba ngafisa kwangathi kungavuleka umhlaba ngizifihle kuwo. Ngesambulo nangokukhanyiselwa yizwi likaNkulunkulu, ngakwazi ukubona ukuthi isimo sikaSathane esasingaphakathi kwami sabe sisikhulu kakhulu. Nganginaleyo mvelo yokuzithwala nokuqhosha eyangenza ngazizwa ukuthi ngingcono kunabanye abantu. Angizange ngibe ngisho nokuncane ukuziqaphela; angizange ngibone ukuthi ngangingengcono. Ngakho-ke, lapho ngisebenza nodade njalo ngangicabanga ukuthi yimi engiphethe, ukuthi yimina umholi. Ngangilangazelela ukuba udade alandele mina kuyo yonke into futhi alalele mina. Njalo ngangicabanga ukuthi yimina engiyinhloko. Lapho imibono kadade iphambana nowami, angizange ngifune iqiniso ukuze ngixazulule ingxabano noma sifike ekuqondeni okufanayo. Kunalokho, ngangihluthuka bese ngiba nesimo somqondo esibi ngenxa yokuphoxeka kufike eqophelweni lokuthi ngangizoshiya umsebenzi wami ukuze ngikhiphe ukukhungatheka kwami. Ngaba nemibono engangiyakhe kusengaphambili ngodade futhi angizange ngicabange ngokuthatha isinyathelo sokuthuthukisa ubuhlobo bethu obungebuhle. Lapho sisebenza ndawonye, njalo ngangikhombisa isimo somqondo esimnene. Angizange ngifune ukuba mina ngiguquke, ngabukela phansi ukuba nengxoxo yokuthululelana izifuba nodade. Ngangigxila kuye futhi ngifuna yena ukuba aguquke. Ngangizicabanga ukuthi ngiyinkosi yeqiniso futhi ngibona abanye abantu njengabakhohlakele. Kuyinqubo yokusebenza ndawonye, angizange ngizihlole mina. Lapho udade eba nesimo sengqondo esibi, noma lapho kuba nokushayisana kwemibono phakathi kwethu, ngangithatha lonke icala ngilibeke kulowo engangisebenza naye. Ngangikholwa ukuthi uyena osephutheni nokuthi mina anginaphutha, ngakho ngangimehlisa enhliziyweni yami futhi ngimbandlulula kuze kuze sephuzwini lokuthi ngimphathe njengesitha, ngifune ukubona engisebenza naye ezenza isiphukuphuku. Ekuboneni ukuzithwala kwami, ukuqhosha okunobuqaba, ukungabi nangqondo, ukwenyanyeka, kanye nokuziphatha kwami ngokucindezela, kwakungenzeka kanjani ukuthi kube nanoma yimuphi umqondo wobuntu ongokwemvelo okahle osele kimi? Ngangingenangqondo ngempela! UNkulunkulu wangipha umusa Wakhe futhi wanginika ithuba lokuthatha umthwalo, kodwa angizange ngicabange ngokusebenzisana kahle nodade emisebenzini yethu ukuze sanelise uNkulunkulu. Usuku lonke, angizange ngenze umsebenzi ngokwethembeka, ngangimelana naye, futhi ngibe nengxabano yomhobholo naye. Usuku lonke engangikwazi kuphela ukuba nokuxabana ngokungeneliswa kwami kanye nokulwa njalo ngesithunzi nokungabi nalusizo kwami. Ingabe ngangibe nonembeza ohluzekile? Ingabe ngangingumuntu ofuna iqiniso? Kusukela ekuqaleni, udade kanye nami asizange sithobelane noma sisekelane emsebenzini wethu; kunalokho, sasiziphethe thina futhi yilowo ezenzela izinto zakhe. Ingabe ngangingekho endleleni yomphikukristu? Ingabe ukwenzeka kwezinto ngale ndlela kwakungaholeli ekuzifakeni eweni? Namuhla, sengiyakwazi ukubona ukuthi ukuziphatha kwami konke kwakuyizifiso zobugovu zenyama. Imvelo yami yayinobugovu futhi yonakele. Angizange ngifune iqiniso kangangokuthi iminyaka yami eminingi yokukholwa kuNkulunkulu ayizange ingilethele lutho lwangempela futhi akubanga khona nomucu wokuguquka esimweni sami. UNkulunkulu udinga ukuba senze izwi lakhe ezimpilweni zethu, kodwa mina ngaziqhelelanisa nalo ekufezeni imithwalo yami. Empeleni ngingumuntu ongakholwa! Ngangingeke ngiqhubeke ngale ndlela, ngangizimisele ukufuna iqiniso futhi ngiguquke.
Ngemva kwalokho, ngafunda izwi likaNkulunkulu elathi: “Uma nina bantu enengamele ukusebenza emabandleni ningafundi komunye nomunye, futhi nixoxisane, nisekelane eziphambekweni zomunye nomunye, ningazifunda kuphi izifundo? Lapho nihlangabezana nanoma yini, kufanele nixoxisane, ukuze ukuphila kwenu kuzuze. … Kumele nifinyelele ukubambisana okunobunye ngenxa yomsebenzi kaNkulunkulu, ngenxa yokuzuza kwebandla, nokugqugquzela abafowethu nodadewethu ukuba baye phambili. Ubambisana naye, naye abambisane nawe, omunye ulungisa omunye, nifinyelele kumphumela ongcono womsebenzi, ukuze nenze intando kaNkulunkulu. Yilokhu kuphela ukubambisana kwangempela, futhi yilabo bantu kuphela abanokungena kwangempela. … Umuntu nomuntu kini, njengabantu abakhonzayo, kufanele akwazi ukulwela izinto eziyizinzuzo zebandla kukho konke akwenzayo, kunokufuna izinto ezithandwa nguwe. Akwamukeleki ukuya kuye uwedwa, lapho umbukela phansi naye ekubukela phansi. Abantu abenza ngale ndlela akufanele bakhonze uNkulunkulu!” (“Khonza Njengoba Kwenza Ama-Israyeli” kwethi Izwi Livela Lisenyameni). Futhi kwathiwa entshumayelweni: “Akukho qhaza eliphambili kanye nelesekela ekusebenzeni ukuhlanganisa. Wonke umuntu uyalingana, futhi isimiso ngukuthola ukuvumelana ngokuhlanganyela ngeqiniso. Lokhu kudinga ukuba abantu balalelane. Okuwukuthi, noma ubani okhuluma ngokuyikho futhi okhuluma ngokuhambisana neqiniso kufanele alalelwe. Isimiso siwukulalela iqiniso. Iqiniso liyigunya, futhi noma ubani ohlanganyela ngento ehambisana neqiniso futhi abone izinto ngokunembile kufanele alalelwe. Akukhathaleki ukuthi abantu benzani noma yimuphi umsebenzi abawufezayo, ukulalela iqiniso njalo kuyisimiso’’ (“Okushiwoyo Nencazelo Yezimiso Eziyishumi Zempilo Yebandla Ezimiswe Umndeni KaNkulunkulu’’ encwadini ethi Amalungiselelo Omsebenzi). Embuthanweni nasezwini likaNkulunkulu, ngabona indlela ukubambisana emsebenzini okufanele kwenziwe ngayo. Okuwukuthi, ukucabangela intando kaNkulunkulu kanye nokuvikela okuthandwa ngumndeni kaNkulunkulu ngesikhathi sokusebenza ndawonye. Kungakhathaleki ukuthi yini eyenziwayo noma uyini umsebenzi, kufanele konke kwenziwe ngokuthobela iqiniso ngokukhuluma ngeqiniso ukuze kufinyelelwe ekuqondeni okufanele. Ngeke uzithwale futhi uqhoshe kakhulu ukuze ulondoloze imibono yakho futhi wenze abanye balalele wena, futhi ngeke uthengise iqiniso ukuze uvikele ubudlelwano bomuntu nabanye. Ngaphezu kwalokho ngeke ulandele umuntu ngamunye ukuze wenze ukuzimela, kufanele uzithobe futhi uthathe isinyathelo sokuzidela, ufunde komunye, futhi ubekezelele ubuthakathaka bomunye ukuze kube nobuhlobo bokusebenza obunokuzwana. Kungokungena kuphela kulolu hlobo lobuhlobo bokusebenza bangempela, ukwanelisa uNkulunkulu kukho konke ngenhliziyo eyodwa nangomqondo owodwa, kanye nokuvala ubuthakathaka bomunye lapho ungakwazi khona ukuba nezibusiso kanye nesiqondiso sikaNkulunkulu, okungenza ibandla lithole imiphumela engcono emsebenzini walo ngesikhathi futhi kuhlomula izimpilo zenu. Ngokuphambene, uma ninokuzithwala ngesikhathi nisebenza ndawonye, uma ningafuni ukulandela isimiso seqiniso futhi nenza ukulawula abanye ngobundlovu kayiphikiswa, noma uma usebenza wena futhi wethembela kuwe ekwenzeni izinto, khona-ke uzokwenyanyeka kuNkulunkulu futhi wenze umonakalo ebandleni likaNkulunkulu. Nokho ngangizithwele futhi njalo ngifuna ukuba nezwi lokugcina. Kungani ngangingazi ukuthi umsebenzi emndenini kaNkulunkulu awuyona into engenziwa umuntu oyedwa? Bonke abantu abanalo iqiniso futhi balintula kakhulu impela. Ukuzethemba wena ekwenzeni into kungenza kwenzeke izingozi. Kungokusebenzisana kuphela okungenza ukusebenza okwengeziwe koMoya oNgcwele kutholakale ukuze usize ekusileleni kwethu futhi sigweme amaphutha. Ngaleso sikhathi, ngazizwa nginecala futhi ngizigxeka ngesimo sikaSathane esadaluleka ngokuzithwala nangobugovu bami, kanye nokungabi nokucabangela ngisho okuncane intando kaNkulunkulu, kanye nokugxila kuphela ekungalahlekelweni yisithunzi okwenza ngaveza ukuziphatha okunonya nokushaqisayo. Ngikholwa ukuthi ngangiyimpumputhe kakhulu futhi ngiyisiwula, futhi angizange ngiqonde inhloso kaNkulunkulu yokungilungisela isimo sokuba ngenze ukubambisana ekusebenzeni—kwaze kwaba sephuzwini lokuthi angibanga ngisho nokuncane ukuqonda indlela yokufunda emandleni engangisebenza naye ukuze ngiwasebenzise ukuvala isikhala sokusilela kwami, noma indlela yokufunda lokho engangikudinga ngokusebenza ndawonye. Ngenxa yalokho, kwabangela ukulahlekelwa ebandleni futhi kwabambelela ukukhula kwami empilweni. Namuhla, ngaphandle kwesihawu sikaNkulunkulu futhi ngaphandle kokukhanya kwezwi likaNkulunkulu, ngangingeke ngikwazi ukuzimela futhi ngangingeke ngazi ukuthi ngangingengcono ngalutho. Ngabe ngisafuna abanye ukuthi belalele mina, ngokungathi ngingazethemba mina ekwenzeni kahle umsebenzi webandla. Ekugcineni, ngubani owaziyo ukuthi iyiphi inhlekelele ebiyovela? Ngenxa yalokho, ngenza isinqumo: Ngizimisele ukwenza ngokuvumelana ngezwi likaNkulunkulu, Ngizimisele ukusebenza ngokuzwana nodade emsebenzini webandla kanye nasekhuleni kwami empilweni futhi ngeke ngiphinde ngicabange ngokufunwa yimi siqu.
Ngemva kwalokho, ngavula isifuba sami kudade engangisebenza naye ngendlela engangizazi ngayo. Saxoxa ngempela futhi sangena esimisweni sokusebenza ndawonye. Ngemva kwalokho, umsebenzi wethu waba nokuzwana okwengeziwe. Lapho siba nemibono eyahlukene, sasithandazela iqiniso futhi sifune intando kaNkulunkulu. Lapho sibona amaphutha omunye, sasiqonda futhi sithethelelane; saphathana ngothando. Singaqondile, sezwa izibusiso sikaNkulunkulu nezithelo zomsebenzi wevangeli zembuleka kakhulu kunangesikhathi esedlule. Ngalesi sikhathi ngayizonda nangokwenziwe imvelo ekhohlakele enganginayo; ngakuzonda ukuthi angizange ngifune iqiniso futhi ngamenzela phansi ngokwedlulele uNkulunkulu. Ekugcineni ngezwa ubumnandi bokwenza iqiniso futhi ngezwa amandla engeziwe okufeza imisebenzi yami nokududuza inhliziyo kaNkulunkulu. Kusukela manje kuye phambili ngizimisele ukungena kokungokoqobo ezintweni eziningi zeqiniso kanye nokufuna ukuba nesimiso kukho konke engikwenzayo.
Okwedlule：Susa Ukuzenzisa, Bese Uqala Impilo Kabusha
Okulandelayo：Kungani Ngihambe Endleleni YabaFarisi?
UTong Xin Esifundazweni saseFujian Ngazalelwa ezindaweni ezingaphandle kwasemadolobheni. Ngazalelwa emndenini wabalimi abazithobile futhi phez…